January 2020 - Page4of 21 - Myanmar Sports Villages
ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်(၂၄)ရဲ့ အကောင်းဆုံးကစားသမား(၁၁)ဦးက ဘယ်သူတွေဖြစ်မလည်း—–
အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်(၂၄)ရဲ့ ပွဲစဉ်တွေမှာ ချယ်ဆီးနဲ့ အာဆင်နယ်အသင်းတို့တွေ့ဆုံတဲ့ လန်ဒန်ဒါဘီပွဲစဉ်အပါအဝင် ပရိသတ်တွေအကြိုက်တွေ့စေမယ့်ပွဲစဉ်တွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ချန်ပီယံဆုအတွက်တစ်ပြေးနေတဲ့ လီဗာပူးတို့အဝေးကွင်းမှာ နိုင်ပွဲဆက်နေဆဲဖြစ်ပြီး ရလဒ်ဆိုးတွေကြားမှာ ဝဲလည်နေတဲ့ မန်ယူအသင်းကတော့ အိမ်ကွင်းအိုးထရက်ဖို့စ်မှာ ဘန်လေအသင်းကို (၂)ဂိုးပြတ်နဲ့အရေးနိမ့်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုရွေးချယ်ပေးမယ့် အကောင်းဆုံကစားသမား(၁၁)ဦးစာရင်းကိုတော့ ကစားသမားတွေရဲ့ ကွင်းအတွင်းမှစွမ်းဆောင်ရည်အချက်အလက် Rating တွေအရရွေးချယ်ပေးမှာဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့ ဆန္ဒနဲ့ထပ်တူကျမယ့် ကစားသမားတွေလည်းပါဝင်မှာဖြစ်သလို လွဲချော်မယ့်ကစားသမားတွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်။ (၄-၄-၂)ကစားကွက်အခြေခံရွေးချယ်ပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ ပထမဆုံးရွေးချယ်ပေးမယ့်သူက ဂိုးသမားနေရာအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ (၁) နစ်ပုတ် (ဘန်လေ) မန်ယူ ဝ-၂ ဘန်လေ ************** မန်ယူအသင်းကို အဝေးကွင်းမှာ ဘန်လေတို့အနိုင်ယူခဲ့ရာမှာ အဓိကကျတဲ့ ကစားသမားတွေမှတစ်ဦးလို့သတ်မှတ်နိုင်သူပါ။ဒီပွဲစဉ်မှာ မန်ယူအသင်းရဲ့ ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှု(၂၄)ကြိမ်ထိရှိခဲ့ပြီး ဂိုးပေါက်တည့်ခဲ့တဲ့(၇)ကြိမ်လုံးကို နစ်ပုတ်က ကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာဒီပွဲစဉ်မှာ ဘောလုံးထိ ချက်(၄၆)ကြိမ်ထိရှိခဲ့ပြီး ယူနိုက်တက်အသင်းဂိုးသမား ဒီဂီယာက ထိချက်(၃၃)သာရှိခဲ့တာပါ။ ဒီပွဲစဉ်မှာ သူ့ရဲ့ Rating က (8.5) ဖြစ်ပြီး ပွဲစဉ်(၂၄)ရဲ့အကောင်းဆုံး ဂိုးသမားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ (၂) ရီကာဒို ပါရဲရား...
မက်ဗီယန်ကို နှင့် ပတ်သတ်သည့် ကောလဟလသတင်းတွေအပေါ်မှာ မှတ်ချက်ပေးသွားခဲ့သည့် အာတီတာ
ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းအတွင်းက အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ရှက်တာဒိုးနက်အသင်းရဲ့ နောက်ခံလူ မက်ဗီယန်ကို ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက် သူ့ရဲ့ အေးဂျင့်ကို ချဉ်းကပ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ သတင်းများထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ နောက်တန်းမှာ လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတာဖြစ်ပြီး အဆိုပါ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့အတွက် ယခုအပြောင်းအရွှေ့ကာလအတွင်းမှာ လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အားကိုးရတဲ့ နောက်ခံလူ ဖြစ်တဲ့ ကယ်လန်ချိမ်ဘာဟာ ဒူးဒဏ်ရာကြောင့် လက်ကျန်ရာသီဝက်တစ်ခုလုံး အနားယူရတော့မှာဖြစ်သလို၊ ဟိုးလ်ဒင်းကလည်း ကြံ့ခိုင်မှုမပြည့်ဝသေးတာကြောင့် ဗဟိုခံစစ်မှူ းတစ်ယောက်ကို ခေါ်ယူဖို့ စဉ်းစားလာတာပါ။ ပြီးခဲ့သည့် နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့မှာ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ပြောင်းရွှေ့ကြေး မြောက်မြားစွာ သုံးစွဲခဲ့ပြီးသည့်အတွက် ယခုဆောင်းရာသီအပြောင်းအရွှေ့မှာတော့ လူသစ်ထပ်မံခေါ်ယူဖို့ကိစ္စကို အတော်လေးစဉ်းစားနေရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မက်ဗီယန်ကိုဟာ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ပစ်မှတ်များထဲက ဦးစားပေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး လောလောဆယ်မှာ ကမ်းလှမ်းမှုတွေ ပြုလုပ်ထားတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ဒီအပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စနှင့် ပတ်သတ်ပြီး အာတီတာက ယနေ့မှာ ပြုလုပ်သွားခဲ့တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ မတင်မကျပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ “ကျွန်တော်တို့ ချိတ်ဆက်နေတဲ့...
မက်ဆီကို အင်အားအကောင်းဆုံး ကစားသမားလို့ ချီးကျူးခဲ့ပြီး ဘာကာရဲ့သမိုင်းကို ရေးထိုးချင်တယ်လို့ ဆိုလာတဲ့ ဂရစ်ဇ်မန်း
ဘာစီလိုနာတိုက်စစ်မှူး ဂရစ်ဇ်မန်းက အသင်းဖော် တိုက်စစ်ကစားသမား လီယွန်နယ်မက်ဆီကို ကမ္ဘာပေါ်မှာ အင်အားအကောင်းဆုံး ကစားသမားဖြစ်တယ်လို့ ချီးကျူ းခဲ့ပြီး သူဟာ အာဂျင်တီးနားအသင်းခေါင်းဆောင်နှင့်အတူ ဘာစီလိုနာရဲ့ သမိုင်းသစ် ရေးထိုးချင်တယ်လို့ ရည်ရွယ်ထားကြောင်း ဖွင့်ဟသွားခဲ့ပါတယ်။ စပိန်လာလီဂါ ရုပ်သံChannel တစ်ခုဖြစ်တဲ့ DAZNနှင့် တွေ့ဆုံခန်းမှာ ဂရစ်ဇ်မန်းက- ” သိပ်ကိုဂုဏ်ယူစရာ ကောင်းပါတယ်။ ဘာစီလိုနာအသင်းမှာ ကစားရလို့ သိပ်ကိုဝမ်းသာမိပါတယ်။ ကျွန်တော့်အဖေက သူ့သားကို ဘာစီလိုနာအသင်းမှာ ကစားနေတာကို မြင်ရလို့ အရမ်းဝမ်းသာ နေတာပါ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော် ဒီကလပ်ရဲ့ သမိုင်းကို ရေးထိုးချင်ပါတယ်။ ဒါကို စွမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ ကျွန်တော်ကြိုးစားရမှာပါ။ ဒီအသင်းအတွက် အရေးကြီးတာမှန်သမျှ ကျွန်တော်တက်တက်ကြွကြွ လုပ်ဆောင်သွားမှာပါ”လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး ပြင်သစ်လက်ရွေးစင် တိုက်စစ်မှူးက သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထုတ်ဖော်သွားခဲ့ပါတယ်။” ကျွန်တော့်ရဲ့ သွင်းဂိုးနှုန်းရော၊ ဂိုးဖန်တီးမှု အပိုင်းမှာပါ ဆက်ပြီး...
ယူနိုက်တက်အသင်းမှာ မော်ရင်ဟို လိုချင်တဲ့ကစားသမားတွေ မရခဲ့ပါဘူး #လူကာကူ
ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ကစားသမားဟောင်း လူကာကူကတော့ ဆရာသမား ဖြစ်သူ မော်ရင်ဟို ကို လေးစားသမှု ထားရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး ယူနိုက်တက်အသင်းမှာ မော်ရင်ဟို အလိုရှိတဲ့ ကစားသမား ခေါ်ယူပေးခဲ့ပါက ပိုလို့တောင် အောင်မြင်မှု‌တွေ ကြောက်စရာကောင်းလာနိုင်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ လူကာကူကို ၂၀၁၇ခုနှစ် နွေရာသီက အိုးထရက်ဖို့ဒ်အသင်းထံ ပေါင် (၇၅)သန်းနဲ့ မော်ရင်ဟိုက ခေါ်ယူခဲ့တာပါ. ဒါ့အပြင် ပေါ့ဘာ ၊ လင်ဒီလော့တို့လို ကစားသမားတချို့ကိုလည်း အားဖြည့်ပါသေးတယ်။ သတင်းမီဒီယာတချို့မှာတော့ မော်ရင်ဟို အလိုရှိတဲ့ ကစားသမားတွေ ကို ခေါ်ယူဖို့ ယူနိုက်တက် ဘုတ်အဖွဲ့က တားမြတ်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါဖူးပါတယ်။ လူကာကူအနေနဲ့ကလည်း သူရဲ့ နည်းပြဟောင်း မော်ရင်ဟိုအနေနဲ့ လုံလောက်တဲ့ အကူအညီ အထောက်အပံ့တွေသာ ရရှိမယ်ဆိုရင် ယခုထက်ပိုပြီး အောင်မြင်သွားမယ် လို့ ခံစားမိနေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့အရည်အ‌ချင်းကောင်း‌ကို ဆွဲထုတ်နိုင်တဲ့ နည်းပြတွေအကြောင်းကို မေးမြန်းရာမှာ လူကာကူ...
အပြောင်းအရွှေ့မပိတ်ခင် ကစားသမားသစ် တစ်ယောက်၊ နှစ်ယောက်လောက် ခေါ်ယူဖို့ မျှော်လင့်ထားသည့် ဆိုးလ်ရှား
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ယခုအပြောင်းအရွှေ့တွင်း ကစားသမားများစွာ နှင့် အပြောင်းအရွှေ့သတင်းများထွက်ပေါ်နေသော်လည်း လက်ရှိအချိန်မှာတော့ တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှပင် ရောက်ရှိလာခြင်းမရှိပေ။ နည်းပြ ဆိုးလ်ရှားကတော့ အပြောင်းအရွှေ့မပိတ်ခင် အချိန်အတွင်း အသင်းသို့ ကစားသမား အသစ် တစ်ယောက် သို့မဟုတ် နှစ်ယောက်လောက် ရောက်ရှိလာဖို့ မျှော်လင့်ထားကြောင်း ဖွင့်ဟလိုက်ပါတယ်။ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့မှာတော့ ဆောင်းရာသီအပြောင်းအရွှေ့တံခါးကြီး ပိတ်မှာဖြစ်ပြီး ဒီကြားထဲမှာ အပြောင်းအရွှေ့လုပ်ဖို့အတွက် အချိန်တစ်ပတ်မျှသာ ကျန်ရှိပါတော့တယ်။ အသင်းရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေမှာလည်း အဓိကကစားသမားတွေ ဒဏ်ရာရနေတာကြောင့် ရလဒ်ပိုင်းတွေဆိုးရွားနေပြီး ပရိသတ်များကလည်း ကစားသမားသစ်များခေါ်ယူဖို့ တိုက်တွန်းလျက်ရှိပါတယ်။ လာမယ့် ဇန်နဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့မှာတော့ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ FA ဖလား ပွဲစဉ်အဖြစ် လိဂ် (၁) ကလပ် Tranmere နှင့် ကစားရမှာဖြစ်ပြီး ဒီပွဲမတိုင်ခင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ ဆိုးလ်ရှားက အပြောင်းအရွှေ့နှင့်ပတ်သတ်၍ ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။ “ကျွန်တော်ဟာ အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်နေတာပါ။...
ပရီးမီးယားလိဂ် ထိပ်တန်းတိုက်စစ်မှူး ဝယ်ယူသင့်ကြောင်း ရလဒ်ဆိုးနေသည့် အသင်းကြီးများအား ဂျိုးလ်ကိုး အကြံပေး
ပရီးမီးယားလိဂ် ထိပ်တန်းအသင်းများ ဖြစ်ကြသော ချယ်လ်ဆီး၊ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်၊ တော်တင်ဟမ် အသင်းတို့ဟာ တိုက်စစ်ပြဿနာများဖြင့် ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ နွေရာသီက ထွက်ခွာသွားသော ရိုမီယို လူကာကူ၏ နေရာအား အစားထိုးခဲ့ခြင်း မရှိသလို ရက်စ်ဖို့ဒ်၏ ဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့် မဖြစ်မနေ အစားထိုးဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။ ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ နွေရာသီက ကစားသမားအသစ် ခေါ်ယူခွင့် မရရှိခဲ့သလို တန်မီအေဗရာဟမ်ဖြင့်သာ ကျားကန်ထားရပါတယ်၊ ဘတ်ချူဝါရီ၊ အိုလီဗာဂျီရူး တို့ဟာ အဆင်မပြေသလို သွင်းဂိုး တစ်ဂိုးရဖို့ပင် ခက်ခဲနေပါတယ်။ မော်ရင်ဟို၏ တော်တင်ဟမ်အသင်းဟာ ဟယ်ရီကိန်း၏ ရာသီကုန်ထိ အနားယူရမည့် ဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့် ကစားသမားသစ် လိုအပ်နေပါတယ်။ ချယ်လ်ဆီးအသင်းနှင့် အင်္ဂလန်တိုက်စစ်မှူးဟောင်း ဂျိုးလ်ကိုးဟာ ယူနိုက်တက်၊ ချယ်လ်ဆီး၊ တော်တင်ဟမ်အသင်းတို့အား ပရီးမီးယားလိဂ်တွင် ခြေစွမ်းပြနေသည့် ဝုဗ်အသင်း တိုက်စစ်မှူး ရာအူးဂျေမီနပ်စ်အား ခေါ်ယူသင့်ကြောင်း အကြံပြုခဲ့ပါတယ်။ ”...
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ ရလဒ်တွေ ဆက်တိုက်ဆိုးရွားနေပြီး ပရိသတ်များ အသင်းရဲ့ ရလဒ်တွေအပေါ် စိတ်ပျက်နေကြပါတယ်။ နည်းပြဆိုးလ်ရှားဟာ အဓိက ကစားသမားအချို့ ဒဏ်ရာပြဿနာတွေ ရှိနေပေမယ့် အသင်းနဲ့ လိုက်ဖက်မည့် ကစားကွက်တစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ လက်ရှိအချိန်မှာ ပရီးမီးယားလိဂ် ရည်တည်မှုအရ အမှတ်ပေးဇယား အဆင့် ၅ မှာ ရပ်တည်နေပေမယ့် ပြိုင်ဘက်အသင်းများ ခြေချော်‌ခြင်းကြောင့်သာ ရပ်တည်နေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ၂၄ အထိ ကစားပြီးချိန်ထိ ရမှတ် ၃၄ မှတ်သာ ရရှိထားသလို ပရီးမီးယားလိဂ် အမှတ်ပေးဇယားအား လီဗာပူးအသင်းဟာ ရာနှုန်းပြည့်နီးပါး နိုင်ပွဲများ ရယူထားနိုင်ပြီး အမှတ်ပေးဇယား အဆင့် ၁ မှာ ရပ်‌တည်နေသော လီဗာပူးအသင်းနဲ့ ရမှတ် ၃၀ ထိ ကွာဟနေသလို ၁၉၈၈-၁၉၈၉ နောက်ပိုင်း...
ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လောက် အမှတ်ဖြတ်ထားတယ်ဆိုတာကို ခေါင်းထဲမထည့်ထားပါဘူး #ကလော့ပ်
လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ ယနေ့နံနက်အစောပိုင်းမှာ အသင်းကြီးတွေကို ဒုက္ခပေးတဲ့ ဝုဗ်လ်အသင်းကို အဝေးကွင်းမှာ ဟန်ဒါဆင်၊ ဖာမီနိုတို့ရဲ့ သွင်းဂိုးနဲ့အတူ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ရာနှုန်းပြည့် နိုင်ပွဲဆက်နေပြီးတော့ ဒုတိယနေရာက မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းနဲ့အတူ ၁၆ မှတ်ဖြတ်ကာ ဦးဆောင်နေပါတယ်။ ရမှတ်တွေ ဒီလောက်ဖြတ်ထားပြီးပေမယ့် ဂျိုးကြာနီနည်းပြ ဂျာဂင်ကလော့ပ်ကတော့ အာရုံမထားပဲ ပွဲတိုင်းရလဒ်ကောင်းဖို့ကိုသာ အာရုံစူးစိုက်ထားပါတယ်။ “ဒီနှစ်လား မနှစ်ကလား ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ဖိအားတွေ ပိုလာတယ်ဆိုတာ? လူတွေကတော့ ဒီလိုပါပဲဗျာ။ ဒီအကြောင်းတွေကို လုံးဝမစဉ်းစားပါဘူး။ အခုချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လောက်ထိ အမှတ်တွေဖြတ်ထားလဲဆိုတာကို တိတိကျကျသိချင်ပါတယ်။ ဒါဟာ အမှန်တရားပါ။ ဒီတပတ်ဆိုရင် ပွဲတွေဆက်တိုက်ကစားနေရတာကြောင့် အဲ့ဒီအကြောင်းကို ကျွန်တော်လုံးဝမေ့သွားခဲ့တယ်။ လုံးဝလည်း မစဉ်းစားခဲ့ပါဘူး” “ကျွန်တော်အခုသိတာက လာမယ့် တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ရှောဘယ်ရီနဲ့ ကစားရမယ်၊ ပြီးရင် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ ဝက်စ်ဟမ်းနဲ့ ကစားရမယ်။ ပြီးရင် စနေနေ့မှာ ဆက်ပြီးတော့ တပွဲကစားရမယ်။ ၇...
အဲရစ်ဆင်ကို ခေါ်ယူချင်တဲ့ အထဲမှာ ဘာစီလိုနာပါ ပါလာပါပြီ!!!
ရာသီအကုန်မှာ စပါးစ်အသင်းနဲ့ လမ်းခွဲတော့မယ့် ဒိန်းမတ်ကွင်းလယ်လူ အဲရစ်ဆင်ကို အင်တာမီလန် အသင်းက ခေါ်ယူဖို့ ချိတ်ဆက်နေသည့်အပြင် ဘာစီလိုနာအသင်းကလည်း ခေါ်ယူနိုင်ဖို့အတွက် မေးမြန်းစုံစမ်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Sky Sports က ဖော်ပြထားပါတယ်။ အဲရစ်ဆင်ဟာ စပါးစ်အသင်းနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်း တိုးဖို့ ကိစ္စကို အကြိမ်ကြိမ်ငြင်းပယ်ခဲ့သလို၊ ပြီးခဲ့သည့် ရာသီကုန်ကတည်းက အသင်းပြောင်းဖို့ ကြေငြာထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရာသီဟာ သူ့အတွက်တော့ နောက်ဆုံးဖြစ်နေတာကြောင့် သက်တမ်းမကုန်ခင် ၆ လလောက်ကတည်းက တခြားအသင်းတွေဟာ ကြိုတင်သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာမီလန်အသင်းကတော့ အဲရစ်ဆင်ကို ခေါ်ယူဖို့အတွက် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပြီးဖြစ်သလို၊ ပြောင်းရွှေ့ကြေးကိစ္စညှိ့နှိုင်းနေပါတယ်။ စပါးစ်အသင်းဟာ အဲရစ်ဆင်ကို အလွတ်ကြေးနဲ့ လက်လွှတ်ရမှာထပ် ပြောင်းရွှေ့ကြေးအနည်းငယ်နဲ့ ယခုဆောင်းရာသီအပြောင်းအရွှေ့ကတည်းက ရှင်းထုတ်ဖို့ ကြံရွယ်ထားပါတယ်။ အင်တာမီလန်နဲ့ ညှို့နှိုင်းမှုအဆင်မပြေခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ အဲရစ်ဆင်ဟာ ရာသီကုန်ထိ စပါးစ်အသင်းမှာ ဆက်ရှိနေမှာဖြစ်ပြီး ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့ရောက်တာနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်မြေကို စွန့်သွားမှာပါ။...
အာတီတာတစ်ယောက် ထိပ်တန်းနည်းပြဖြစ်လာမည်ဟု တထစ်ချယုံကြည်ထားသည့် ဆန်တီကာဇိုလာ
အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ကစားသမားဟောင်းကြီး ဆန်တီကာဇိုလာဟာ လက်ရှိအသင်းရဲ့ နည်းပြဖြစ်သူ အာတီတာအပေါ်မှာ ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိနေပြီး တစ်နေ့နေ့မှာ ထိပ်တန်းနည်းပြတစ်ယောက်ဖြစ်လာမည်ဖြစ်ဟု ယုံကြည်ထားကြောင်းဖွင့်ဟသွားခဲ့ပါတယ်။ အာတီတာဟာ ပြီးခဲ့သည့် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ဂွာဒီယိုလာရဲ့ လက်အောက်မှ ခွဲထွက်ကာ အူနိုင်းအမ်မရီ မရှိတော့တဲ့ အာဆင်နယ်အသင်းကို နည်းပြချုပ်အဖြစ် စတင်ကိုင်တွယ်ခဲ့ပါတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ အာတီတာလက်ထဲရောက်ကတည်းက ကစားပုံ နှင့် စိတ်ဓာတ်ပိုင်းတိုးတက်မှုများရှိလာခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ (၇) ပွဲဆက်တိုက်မှာ ချယ်လ်ဆီးအသင်းကိုသာ ပထမအကျော့မှာ ရှုံးနိမ့်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံး (၇) ပွဲမြောက်ဖြစ်တဲ့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းနဲ့ ဒုတိယအကျော့ပွဲစဉ်မှာတော့ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ နောက်ကျသွင်းဂိုးနှင့်အတူ အဝေးကွင်းမှာ သရေတစ်မှတ်ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲဟာ အာတီတာအတွက်တော့ (၃) ပွဲဆက် သရေကျခဲ့တာဖြစ်သလို၊ (၄) ကြိမ်မြောက် သရေပွဲတစ်ပွဲလည်း ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ လက်ရှိအမှတ်ပေးဇယား ရပ်တည်မှုက အဆင့် (၁၀) မှာဖြစ်ပြီး အဆင့် (၄) နေရာက...